Nahoana aho no tokony hanohana ny fikarohana tranonkala amin'ny SEO video marketing?
Matetika dia mitaky fotoana sy asa be dia be ny mahita ny marika famantarana ny SEO manolotra vokatra voalohany. Ahoana ny fomba hananganana fitomboana matanjaka kokoa? Mila mandrindra ny paikady fanatsarana ny fikarohana ianao amin'ny alalan'ny drafitra sasantsasany hiantsoana ny mpihaino sy ny mpikaroka. Ka nahoana àry no tsy manandrana tetika sasany amin'ny SEO video marketing? Toy ny fitambaran-tsaina tonga lafatra ny mifantoka amin'ny mpanjifa maivana kokoa rehefa mitazona sy mampivelatra ny mpanjifanao na mpamaky anao ianao, sa tsy izany? Na izany na tsy izany, mino aho fa ireto filazana manaraka ireto momba ny fampiasana ny SEO sy ny fivarotana horonan-tsary dia ho ilaina amin'ny fiheverana ara-drariny.
Nahazoana tombony lehibe kokoa
Nahagaga, fa ankehitriny YouTUbe no lasa molekisatra malaza indrindra eran-tany, manaraka Google, ary noho izany niala lavitra ny ezaka iombonana nataon'i Bing sy Yahoo. Inona no dikan'izany? Tsy misy na inona na inona afa-tsy ny hoe tian'ny olona fotsiny ny mijery horonantsary - inviare email gratis. Noho izany, nahoana moa no tsy tokony ho tsara hevitra ny hampidirana ny tranonkalanao miaraka amin'ny votoaty mahaliana na mahafinaritra? Tsy ho an'ny traikefa mpampiasa mahasalama, fa ho an'ny fiovam-po lehibe kokoa. Araka ny fanadihadiana farany momba ny fikarohana, ny fampiasana fanentanana mailaka mety, izay tohanan'ny sehatry ny horonan-tsary SEO dia afaka mampitombo ny fahafahanao mijery ny fidirana amin'ny mailaka amin'ny 51%. Milaza ny olona fa ny fampidirana ny pejin-tranonao amin'ny lahatsary kalitao dia toa mbola maro kokoa ny fampanantenana, izay manana ny fihenan-danja efa ho 2 isan-jato ny fiovam-po. Araka ny voalaza tetsy aloha, ny tanjona fototra amin'ny Search Engine Optimization dia ny hanamafy hatrany ny fiovam-po, raha toa ka mahazo fitarihana avo lenta. Izany no mahatonga ahy maimaim-poana hangataka, farafaharatsiny ny fitaovam-pifandraisana horonan-tsarimihetsika SEO mandritra ny roa taona, ary tsy manenina mihitsy ny manao izany.
Miezaha matanjaka kokoa amin'ny fisoratana
Anisan'ny tanjona maharitra maharitra momba ny SEO dia mitazona sy manamafy orina ny mombamomba ny marika, ary ny fahatsiarovan'ny mpanjifa ny orinasanao Internet. Amin'izany fomba izany, ny fifampiraharahana amin'ny SEO video marketing dia afaka manampy amin'ny fanamafisana bebe kokoa ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao. Ny fananana lahatsary lehibe manintona ho an'ny mpihaino dia midika fa ny tranonkalanao dia lasa mpitarika ao amin'ny tsenan'ny varinao, manome fanampim-baovao mahaliana sy mahaliana, ary koa mamaly ny fanontaniana matetika amin'ny mpampiasa. Izay rehetra hamela ireo mpitsidika tsotsotra ho farafaharatsiny ho mpanaraka feno fanoloran-tena, tsy hiteny ireo tena mpanjifany.
Leave your opponents behind, drive the website with SEO video marketing
Ireo tompon'andraikitry ny orinasa dia miady ho an'ireo niches na lasibatra vondron'olona, ​​noho izany dia mitaky ny tena izy, tsy hiteny toy ny teny fanalahidy sy fehezanteny manan-danja. Saingy ankehitriny ny fitomboan'ny fidirana amin'ny votoaty video dia mampiseho azy eo an-tampon'ny SERPs, amin'ny tànana amin'ny votoatin'ny lahatsoratra amina lahatsoratra. Izany no mahatonga anao tsy hanadino io fotoana tena tsara io hanapahana avy hatrany ireo mpanohitra anao, farafaharatsiny ireo izay mbola tsy misy SEO video marketing. Mandania fotoana sy ezaka kely fotsiny ho an'ny votoatin'ny lahatsary mampientanentana sy sarobidy, fa tsy ho an'ity lahatsoratra bilaogy ity na ny sary nalaina nalefanao tamin'ity herinandro ity, ohatra.